देशभर २७ हजार बढीको काेभिड-१९ परीक्षण, २५४ जना 'रेड जोन'मा | Seto Patrika
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट आठ हजार १७ र आरडीटी किट परीक्षणबाट १९ हजार ४५४ नमूना परीक्षण गरिएको छ।
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालसम्म देशभर २७ हजार बढीकाे काेभिड-१९ परीक्षण भएको जनाएको छ।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पीसीआर परीक्षणबाट आठ हजार १७ र आरडीटी किट परीक्षणबाट १९ हजार ४५४ नमूनाको परीक्षण गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले देशका ७७ वटै जिल्लामा र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट किटबाट परीक्षण शुरू भएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका क्वारेन्टाइनमा चारहजार ५३६ व्यक्ति छन् भने आइसोलेसनमा ११७ जना छन्।
मोबाइल एप्लिकेसन र वेबसाइटमा गरेर हालसम्म २० हजार १३० जनाले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले हिजो, ५ वैशाख उदयपुरमा भेटिएका १२, चितवनमा भेटिएका दुईजनासमेत गरेर काेभिड-१९ संक्रमितको संख्या ३० पुगेको जनाएको छ। तीमध्ये पहिलो संक्रमित यसअघि नै निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने दोस्रो संक्रमित आज निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
Posted in Breaking News, स्वास्थ्य
Prevनिको भएर घर फर्केकी संक्रमित युवती भन्छिन्- ‘सेल्फ आइसोलेसन नै प्रमुख कुरा रहेछ’
nextकोरोनालाई जितेर फर्केकी प्रसिद्धिलाई प्रधानमन्त्रीको बधाई